Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo Xabsi daa’in ku xukuntay nin isku qarxin rabay Tiyaatarka Qaranka | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo Xabsi daa’in ku xukuntay nin isku qarxin...
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo Xabsi daa’in ku xukuntay nin isku qarxin rabay Tiyaatarka Qaranka
Muqdisho (Halqaran.com) – Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Arbacadii Maanta waxaa ay xukun ku riday Nin ku eedeysan in uu watay Boorso ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa, kaas oo kal hore ay Ciidamada Ammaanka qabteen.
7-dii bishii June Sanadkan sii dhammaanaya ayay Ciidamada Amniga ka qabteen Xasan Cabdullaahi Aadan Ex Control Afgooye xilligaasi oo isu soo diyaariyay Sidii uu isugu Qarxin lahaa Xarunta Murtida iyo Mada-daallada oo uu maalin ka hor sheegay in uu soo fiirsaday (Istidhlaac).
Baaritaan dheer kadib Xasan Cabdullaahi Aadan waxa uu qirtay in Sanad iyo xoogaa uu la soo shaqeeyay Al-Shabaab, waxa uuna Al-Shabaab kaga biiray Buur Dhuxunle oo ka tirsan Gobolka Bakool sanadkii 2018.
May 2020 ayaa ugu dambayn loo keenay Jaakada iyo Boorsada uu wada Isticmaali lahaa si’uu isugu Qarxiyo, waxaana la tusiyay Seddax batan oo mid kastaahi laga qarxin karo Jaakadda iyo Boorso wada jira ee dhawaan Isticmaalkeeda Bilowday .
Bartamaha bishiii August ayay iska soo wareejiyeen Hay’ada Baarista, wixii xilligaasi ka dambeeyay Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa isna hubin ku bilaabay daba galka iyo jiritaanka Eedaha Hay’adaha Amniga Baarista.
Qareenada u dooday eedeysanaha ayaa Maxkamadda weydiistay in Eedeysanaha loo Naxariisto Maadaama ay Al-Shabaab kaga faa’ideysteen Aqoon la’aan iyo Duurka uu duruuf kula noolaa.